Antony 8 Maninona ny olona sasany tsy mifona velively na miaiky fa diso izy ireo - Fifandraisana
Antony 8 Maninona ny olona sasany tsy mifona velively na miaiky fa diso izy ireo
Amin'ny tena marina, dia vitsy ny olona mankafy miaiky ny fanaovan-dratsy.
Tsy misy fihazakazahana dopamine miaraka amin'ny fialantsiny.
Tsy misy fanadiovana lalina sy ara-pientanam-po amin'ny filazàna hoe 'Diso aho.'
Ary azo antoka fa tsy misy antoka fa handray tsara ny valin-teny azon'ilay nahazo ny fialantsiny.
Tsy mahagaga, araka izany, fa olona maro tokoa no handà mafy ny hiala tsiny na hanaiky fa diso izy ireo.
Ireto misy antony 8 mahatonga ny olona tsy te-hiala tsiny.
1. Matahotra ny ho hitan'ny malemy izy ireo
Ho an'ny zavatra izay ilana fahasahiana be tahaka ny fanekena ny fanaovan-dratsy na ny fialan-tsiny, ny fiarahamonina tandrefana dia mandany fotoana betsaka amin'ny fametahana ny fahalemena amin'ilay hetsika.
'Mijoroa amin'ny taninao, aza mihemotra, aza manao punk' dia vitsivitsy monja amin'ireo fanehoan-kevitra poizina mety henonao.
Na izany aza, ny fifonana dia tsy mitovy amin'ny fandefasana olona iray hafa, na ny fahatsapana ny filàna mihoa-pampana, tsy tapaka hiaro ny olona malemy paika.
Ny fanekena fa nanao ratsy tamin'ny olona iray ianao dia mila fangorahana sy fanajana ampy amin'ny tenanao sy ny hafa amin'ny fiainanao hiaiky fa matoky azy ireo amin'ny tenanao ianao.
Ny fahatokisana toa izany dia tsy tokony hoheverina ho fahalemena velively.
2. Matahotra famaliana faty izy ireo
Ny olona sasany dia miaina ao anaty boloky maso-maso-izay misy heloka tsy eken'izy ireo - tsapany fa azo hamarinina aminy.
rahoviana i paige no miverina any wwe
Ka ny zavatra farany tadiavin'izy ireo dia ny manokatra ny tenany amin'ny safidy maharary toy izany.
Ireto ny olona izay tsy dia ampy nianatra natoky ny hafa .
Fomba iray hiatrehana azy ireo ny fametrahana fetra mafy orina Around ny fari-taninao, izany hoe, aza avela hanakaiky ireo zavatra ifotony izay manandanja anao izy ireo hahafahan'izy ireo manelingelina anao.
Ny olona iray dia manantena fa afaka mahazo an'io karazan'olona io hianatra hatoky azy isika, fa raha tsy hoe manana izay ahafahantsika mamolavola liona mampiasa rantsankazo, dia lavitra sy sarotra ny lalan'izy ireo matoky, manao ny marina ary marefo.
3. Matahotra ny hamoy olona izy ireo
Misy lojika miolakolaka ao an-tsainao hoe: 'Naratra anao aho, fa ny fanitsiana kosa dia vao mainka handratra anao hatrany amin'ny fialanao.'
Ny iray amin'ireo tahotra mafy indrindra ao ambadiky ny fisalasalana hangataka fialan-tsiny na hanaiky ny tsy nety nataony dia ny eritreritra malemy hamoy olona na zavatra iray noho izany.
Ity tahotra ity dia manohina ny olona mitaky fanomezan-toky hatrany, ary azo iatrehana izany amin'ny alàlan'ny fisokafana sy ny fahamarinana araka izay azo atao.
Mitarika amin'ny ohatra. Raha hitan'izy ireo fa mbola tsy tokony hihoatra ny fiainany isika amin'ny hadisoantsika dia mety hanaiky mora foana ny azy izy ireo.
4. Matahotra izy ireo fa tsy lavorary
Manontany tena ny olona iray hoe hanao ahoana ny fiainana tsy dia mampatahotra raha toa ka mifoha isa-maraina ny olona tokan-tena ary maka fotoana fohy hitenenany am-pony hoe: 'Olombelona aho.'
Manao fahadisoana daholo isika rehetra. Tsy mahay mitsara zavatra daholo isika. Isika rehetra dia manao zavatra izay mety tsy hataontsika rehefa jerena.
Ny fahaizana mahita an'io sy miasa mba hamahana ireo lesoka dia mitaky fahasoavana sy fangoraham-po.
Ireo izay mahatsapa fa tsy tokony hoheverina ho zavatra kely noho ny 'tonga lafatra' dia manafina tahotra ary tsy ampoizina tsy manao afa-tsy ny mitondra fiara eo anelanelan'izy ireo sy ny hafa.
Ny fanekena dia goavana ho an'ireo olona ireo. Ampio izy ireo amin'ny fampahafantarana azy ireo fa tiana izy ireo. Ampahatsiahivo moramora izy ireo fa ny lesoka tsy azo ihodivirana ary na dia mivantana aza mandainga amin'ny hafa dia olombelona toy ny rivotra mifoka.
Raha fantatr'izy ireo fa tsy hananatra azy ireo ianao noho ny hadisoan'ny fombany, dia mety hanaiky kokoa izy ireo fa diso izy ireo.
Ahoana no hijanonana amin'ny fihazakazahana ny olanao ary hiatrehana azy ireo amin'ny fanapahan-kevitra feno fahasahiana
Fomba 9 hiatrehana famadihana sy fanasitranana amin'ny ratra
Fihetsika 9 mety hitarika ny namanao hiala
Ahoana ny famelana ny lasa ary hijanona tsy hanokatra ny ratra taloha intsony
Antony 8 Ny olona sasany mandà tsy hitombo ho olon-dehibe matotra
Maninona ny olona sasany no ratsy toetra, tsy mahalala fomba ary tsy manaja ny hafa?
5. Mankafy korontana izy ireo
Misy ireo izay, noho ny antony tsy nety nataony, dia nankafy nitantana fahantrana.
Ny fitanana sy ny fanaovan-dratsy no mamelona azy ireo. Mpampiasa zava-mahadomelina foana no manao azy. Masokista koa.
Ahoana ary ny fomba hiatrehana olona mikasa hamorona toe-javatra mitaky ny fialantsiny?
Tsotra: ny iray tsy.
dia ny fitiavana fahatsapana na safidy
Toy ireo izay mbola tsy nianatra natoky ny hafa dia fahendrena ny mitazona am-pahavitrihana fetra amin'ireo olona ireo.
mavitrika satria izy ireo dia hitady triatra sy triatra amin'ny rindrina rehetra ary hiditra haingana dia haingana ka ny fitambaran-tantara be kasain'izy ireo hapetraka dia hahataitra anao ary tsy ampoizina.
Raha toa ka afaka manodikodina anao hangataka fialan-tsiny ireo tompon'ny korontana toy izany ny asa ratsy, voky izy ireo amin'ny fahatsapana fa nahazo ny karamany ara-pihetseham-po nandritra ny andro.
6. Be herim-po izy ireo
Ny olona iray dia mety ho tratra miaraka am-pataloha, manolotra siny cookie, taratasy hosoka napetaka eo amin'ny handriny ary ID sandoka manambara azy ireo ho Papa Clemente - ary mbola mety ho lasa kiana ohabolana amin'ny jiro rehefa voantso ny hadisoany. .
Inona no atao amin'ny olona tsy mahalala? Mbola tsy fantatry ny siansa izany.
Marina fa maro ny sociopathic na mipetraka amin'ny spectrum, ary noho izany dia tsy mahazo mamantatra ireo famantarana ara-tsosialy hita miharihary amin'ny ankamaroan'ny zanak'olombelona, ​​fa ny tsy fahatsiarovan-tena dia mety hidina lalindalina kokoa noho izany.
Ny atahorana amin'ny tsy fahatsiarovan-tena dia ny mety ho fitondran-tena ianarana, izay miaro sy manafosafo ny mpianatra, ary manasarotra ny famakivakiana azy.
Hifona izy ireo raha ny azy ireo fahatsapana ho meloka mahazo ampy ny famporisihana ivelany, fa aza antenaina ho tonga haingana izany na tsy misy fampilazana betsaka avy aminao.
7. Mafy hatoka izy ireo
Mafy loha dia fitambaran'ny lesoka rehetra teo aloha.
manan-janaka ve i john cena
Ny olona maditra dia mahafantatra ny toerana misy azy, mahafantatra ny hadisoana, mahafantatra ny fanaintainan'ny hafa, ary mahafantatra fa ny fialan-tsiny tsotra na ny fanekena ny fanaovan-dratsy dia mety hitaky toe-javatra manomboka amin'ny mafana ka hatramin'ny zakaina.
FA, manakana ny tenany tsy hanao izany amin'ny fitsipika izy ireo, na inona izany toro lalana izany.
Ny fomba tsara indrindra hangalana olona mafy loha dia miala tsiny amin'ny tsy famelana azy ireo handeha amin'ny lalany. Antsoy ny bluff-ny. Miorena tsara amin'ny filàna vahaolana.
Rehefa hitan'izy ireo fa ny fitsipiky ny fitehirizan-tena dia tsy midika zavatra, dia amin'ny ankapobeny - na dia himenomenona aza.
8. Tsy te handeha aloha izy ireo
Ny tsy fetezana dia efa nahazo an'io olona io tamin'ny fiainantsika rehetra izay nahatezitra antsika isika, ary izahay, izy ireo, ary ny antoko rehetra dia nahafantatra fa ilaina ny fialan-tsiny amin'ny karazana karazany.
Ny ankamaroantsika dia ho voalohany manolotra am-panambazana an'io sampana oliva io, ho fanamaivanana lehibe an'izay rehetra tafiditra.
Saingy misy ireo izay mandà ny hanomboka ny fizotran'ny fanasitranana.
Ny sasany aza tsy hanaiky ny fialantsiny akory rehefa ny ankilany kosa.
Ahoana no ahafahanao miatrika ny olona toy izany nefa tsy tezitra na manapaka ny fifamatorana tanteraka?
Tariho aminà famporisihana malefaka izy ireo.
Manontany tena hoe: “Te hiteny ve ianao?” mandritra ny fotoana mangatsiaka sy mangatsiatsiaka dia fomba tsara iray hahatonga azy ireo ho tafintohina amin'ny toe-javatra iray, satria ao an-tsain'izy ireo foana ny fifonana fa tsy ho avy velively.
Fomba iray hafa tsara hiatrehana an'io karazana io ny fiatrehana ny lohan'ny fialantsiny / fidirana tsy voalaza.
'Mila miresaka isika,' na ny fiovaovana ao aminy, mampahafantatra azy ireo fa orinasa no tianao holazaina. Mampifantoka ny sain'izy ireo izany ary misoroka ny fahatarana na fanelingelenana hafa.
tokony mandefa ankizivavy mandefa daty ve ianao?
mahatsapa aho fa ampiasain'ny sipako
Zavatra mahafinaritra 10 hatao rehefa leo ianao
vehivavy izay matory amin'ny lehilahy manambady
Matt damon vady aman-janaka